Igbo, John: Lesson 031 - Ozi ọma na Sameria (Jọn 4:39-42) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 031 (Jesus leads his disciples to see the ready harvest; Evangelism in Samaria)
31 N'oge ahụ, ndị na-eso ụzọ ya gbara ya ume, sị: "Rabbaị, rie ihe." 32 Ma ọ sịrị ha: "Enwere m nri iri ihe unu na-amaghị." 33 Ya mere, ndị na-eso ụzọ ya gwara ibe ha, sị: "Ọ dị onye wetaara ya ihe ọ ga-eri?" 34 Jizọs sịrị ha: "Ihe oriri m bụ ime uche onye zitere m na ịrụzu ọrụ ya. 35 Ùnu onwe-unu asighi, Ọnwa anọ fọduru rue owuwe-ihe-ubi? Le, asim unu, Welienu anya-unu abua, hu ubi ahu, na ha chara acha ub͕u a. 36 Onye nēwere ihe ubi nānara ugwọ-ọlu, we chikọta nkpuru rue ndu ebighi-ebi; na onye nāgha nkpuru na onye nēwere ihe ubi nāṅuri ọṅu n'otù. 37 N'ihi na nke a bụ eziokwu, 'Onye na-agha mkpụrụ, onye ọzọ na-ekpokọta ihe.' 38 M ziri gị ka ị na-ewe ihe ubi nke ị na-adọgbughị onwe gị n'ọrụ. Ndị ọzọ adọgbuola onwe ha n'ọrụ, ị banyewokwa n'ọrụ ha."
Mgbe Jisos natara nkpuru obi nke nwanyi nmehie ahu ma duga ya rue ndu ebighebi, o chighariri ndi ozo ya ka ha nye ha ozi yiri nke a. Echiche ha nọgidere na-adị n'ụwa n'ihe onwunwe. Ha adighi-aṅụrị ọṅụ n'ihe Mmụọ Chineke mere n'ime obi nwanyị ahụ. O doro anya na ihe oriri na ihe ọṅụṅụ dị oké mkpa iji lanarị, ma e nwere nri dị oké mkpa karịa nri, na afọ ojuju karịrị mmiri. Nke a ka ha ga-aghọta. Ha adịghị mma karịa ya, n'agbanyeghị na ha na-asọpụrụ Chineke na-eso Jizọs, n'ihi na onye ọ bụla a mụrụ site n'elu agaghị ahụ alaeze Chineke.
Jizos mere ka ha mata ihe nke nri nke elu igwe ma obu nke mo nke neme ka nkpuru obi karia ihe oriri obula. Obi tọrọ Jizọs ụtọ karịa ihe niile na-enye ngọzi ma na-eme uche Nna ya.
Jizọs bụ onyeozi Chineke. O bu nwa nwoke ahu, ma ná-erube nna ya isi, na-eme uche ya noni, n'ihi na Chineke bu ihunanya. Onye ọ bụla nke bi n'ime ịhụnanya na-ebi na Chineke. Nrubeisi Kraịst apụtaghị na ọ dị ala karịa Nna ahụ, mana o gosipụtara ókè ịhụnanya Ya. Nwa ahụ kwuru na nzọpụta ụwa bụ ọrụ Nna Ya, ọ bụ ezie na ọ bu ya n'onwe ya. O nyere Nna ya otuto, dịka Nna ahụ nyeworo Ọkpara ya ihe nile n'oge gara aga. Nna ahụ na-asọpụrụ Ọkpara ya ma debe ya n'aka nri Ya nke na-etinye ikike niile dị n'eluigwe na n'elu ya.
N'okwu nke ọma uche Chineke bụ ịzọpụta nwanyị a dara mbà. O bughi nani ndi Juu a akporo ka a kwaputa ha, bie ihe nile akporo mmadu. Ha nile bu ndi na-eme ihe ojoo ma na-agu nri maka Chineke. Jizos mgbe o zutere nwanyi a ka o huru ntozu oke ya, aguu nke igbaghara ya. Ọ dị njikere ịchọta mgbaghara nke Chineke karịa ya karịa ndị Juu. N'oge na-adịghị anya, ọ hụrụ n'ihu ụmụ mmadụ niile dị ka nnukwu ubi jupụtara na ọka wit na-acha maka owuwe ihe ubi nke Mmụọ Nsọ mere.
Otú ọ dị, ndị ahụ na-eso ụzọ apụghị ịhụ ubi a na-anọchite anya ụwa dị njikere maka owuwe ihe ubi. Jizọs ruru Sameria n'oge oyi na owuwe ihe ubi chọrọ ọtụtụ ọnwa ịpụta. O yiri ka Jizọs ọ na-asị, 'Ị na-ele ihe ndị dị oke ala doro anya. Lee anya n'eziokwu nke bu isi mmadu; ajụjụ ajuju, ọchịchọ maka ndụ dị ukwuu, ịchọ Chineke. Taa bụ owuwe ihe ubi. Ọtụtụ ndị na-echegbu onwe ha ịnakwere Ọkpara Chineke dịka Onyenzọpụta ha ma ọ bụrụ na a na-enye ha amamihe nzọpụta na ịhụnanya.
Ị nwere ike iche na ọ bụghị; ndị niile gbara m gburugburu bụ ndị isi ike, ndị isi ma ọ bụ ndị ìsì. Nke ahụ bụ otú ndị na-eso ụzọ si eche; ha na-ekpe ikpe n'elu ala. Ma Jizọs ghọtara obi. Ọ maghị nwanyị ahụ na-eme mmehie nke na-akpabu ya ntị dị ka ọbịa. Ọ naghị ala azụ ịgwa ya okwu n'agbanyeghị na okwu ime mmụọ karịrị nghọta ya, kama ọ gwara ya okwu n'ụzọ doro anya na n'ụzọ doro anya. Ya mere, o nyekwuru ya aka site na nduzi nke Mmụọ, ma kpọtee ya n'echeta ofufe na ebube nke Mesaịa, ruo mgbe ọ ghọrọ onye nkwusa ozioma. Nso ukpuhode, enye ama ekenyene ndinenede ke utom eke spirit edi ke Nikodimos emi ekedide akpaniko.Lee. Onye ọ bụla nke na-ejere Onyenwe anyị ozi chọrọ nghọta ịhụnanya ya banyere Jizọs ịhụ ndị agụụ na-agụ ezi omume Chineke n'ógbè ha. Echegbula onwe ha banyere enweghị njedebe na enweghị mmasị, Chineke hụrụ ha n'anya; Jizọs kpọrọ ha. Uche ha ga-amara site n'amara site na nta. Ogologo oge ole ka ị ga-anọ jụụ n'ụwa nke nwere ọtụtụ ndị na-achọ Chineke?
Mgbe mmadu chi gharoro nebe kraist no, ndebigho ebi gaabi ya; ọṅụ ga-ejupụta n'obi ya. Ndị mmụọ ozi ga-enwekwa ọṅụ n'etiti ndị mmụọ ozi maka otu onye mmehie na-echegharị. E kwuwerị, Chineke na-achọ ka a zọpụtakwa mmadụ nile ma biakute ihe ọmụma nke eziokwu ahụ. Ndị na-eme ihe kwekọrọ n'uche Chineke, ma na-eme ya site na ikwusara ndị ọzọ ozi ọma ga-emeju mkpụrụ obi ha ma ṅụrịa. Dị nnọọ ka Jizọs kwuru banyere onwe ya, "Ihe oriri m bụ ime uche nke Onye zitere m ma mezuo ọrụ Ya."
Jizos kwusiri ozi ya nye ndi neso uzo na-asi, "Ana m eziga unu ka owuwe ihe ubi." Onye ngbaputa ahu ebowo uzo di iche iche nke oma ikwusa ncheghari - Jisos bu nkpuru nke oka wheat nke Chineke kuru n'ala di njikere. Anyị na-aghọrọ mkpụrụ nke ọnwụ ya taa n'elu obe. Kwesịrị ka Jizọs kpọọ gị ka ihe ubi gị, cheta na nke a abụghị ihe ubi gị. Ọrụ ahụ bụ nke Onyenwe anyị. Ike nke Kraist r] r] nime mkp r nke Mm] nke Mm]. Anyị niile bụ ndị ohu na-abaghị uru, ma ọ na-akpọ anyị ka anyị kesaa ozi ya Chineke, mgbe ụfọdụ ịgha mkpụrụ, mgbe ụfọdụ ịkọ ubi ma ọ bụ ihe ubi. Ọ dị mma icheta na anyị abụghị ndị ọrụ mbụ nke Chineke. Ọtụtụ ndị na-adọgbu onwe anyị n'ọrụ n'ihu anyị; A na-ede ekpere ha n'eluigwe. Unu adighi njikere karia ndi ohu Chineke ndi ozo, unu adighi adi nma. Ị na-ebi oge ọ bụla site na amara nke ịgbaghara gị. Mụta irube isi na Mmụọ na ọrụ gị. Jirinụ otuto na ekele nye Ya n'oge owuwe-ihe-ubi, me kwa ka Nna-unu nke elu-igwe na ndi-ọlu-ubi ọzọ, ndi nēti nkpu, si, Ka ala-eze-Gi bia; gi bu ochichi, ike na ebube ebighi ebi. 'Amen.
c) Ozi ọma na Sameria (Jọn 4:39-42)
39 Ya mere, ọtụtụ ndị Sameria kweere na ya n'ihi okwu nwaanyị ahụ, bụ onye gbara akaebe, sị: "Ọ gwara m ihe niile m mere." 40 Ya mere, mgbe ndị Sameria bịakwutere ya, ha rịọrọ ya ka ya na ha nọrọ. Ọ nọrọ n'ebe ahụ ụbọchị abụọ. 41 Ọtụtụ ndị ọzọ kweere n'ihi okwu ya. 42 Ha we si nwanyi ahu, Ọ bughi n'ihi okwu-gi ka ayi kwere; n'ihi na ayi onwe-ayi anuwo, mara kwa na nka bu Kraist, Onye-nzọputa nke uwa.
Ìgwè mmadụ na-agbakwuru Jizọs si n'obodo ahụ, bụ mgbanwe nke ime nwanyị. N'ime ha, ọ hụrụ ubi ndị mara mma ka a ga-ewe ihe ubi. Ọ gwara ha banyere okwukwe na ndụ ebighi ebi ma nọrọ n'ebe ahụ ụbọchị abụọ zuru ezu. Ndị na-eso ụzọ ya gara n'ụlọ dị ka ndị na-ewe ihe ubi. Onye Kraist na okwu ya mere ihe omimi di omimi. Ha ghọtara na Chineke abatala na Kraịst gaa n'ụwa ọjọọ anyị iji zọpụta ndị mmehie. Ndị Sameria a bụ ndị mbụ na-enye ya aha bụ "Onye Nzọpụta nke Ụwa" ha chere na Jizọs apụtaghị ịzọpụta ndị nke ya, mana ọ na-ebu mmehie mmadụ niile. Odigh njedebe nke ike ya, obuna ubochi a, o nwere ike izoputa ma wepu ndi ohu n'agbata nmehie site n'igide aka Setan, ma chebe ndi nwere onwe ha. Ọ bụ n'ezie onyeikpe nke ụwa. Siza nke dị na Rom bụ "Onye Nzọpụta na Onye Nchebe nke Ụwa." Ndị Sameria a ghọtara na Jizọs karịrị ndị Caes; ọ na-enye ndị ya udo ebighị ebi.
EKPERE: Anyị na-ekele gị Jizọs; ị wughachiri ndụ nwanyị a na-eme mmehie, ma gosi anyị niile, na nrubeisi nke Mmụọ dị mma karịa ofufe. Naputa ayi site na oge, ka ayi we me ka obi gi mezuo obi gi, n'enye kwa ndi di ndu ndu gi, ka ha we nweta ndu ebighebi site n'okwukwe nime gi.
Olee otú anyị si aghọ ndị na-ewe ihe ubi maka Jizọs?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:54 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)